सरकारी स्कूलका शिक्षकको कामः कापी नै नजाँची सीधै अंक, भन्छन्,‘फेल गर्नुहुँदैन, किन जाँच्नु ?’ - TV Annapurna
सरकारी स्कूलका शिक्षकको कामः कापी नै नजाँची सीधै अंक, भन्छन्,‘फेल गर्नुहुँदैन, किन जाँच्नु ?’
तराईका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा सकेसम्म परीक्षा नै गरिंदैनस, परीक्षा भए कापी जाँचिंदैन र कापी जाँचिए विद्यार्थीलाई लब्धांकपत्र दिइँदैन
धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–२ का प्रमोदकुमार महरा आफ्नी छोरी पढाइमा ‘तेज’ भएको बताउँछन् । उनकै गाउँमा भेटिएका महराले भने, “कक्षा २ मा पढ्ने मेरी छोरीको पढाइ धेरै राम्रो छ ।” राम्रो पढाइकै कारण केही दिनअघि छोेरीलाई स्थानीय एक संस्थाले कापी समेत उपहार दिएको उनको भनाइ छ । आधारभूत विद्यालय नकटाझ्जिमा पढिरहेकी आफ्नी छोरी कवितामाथि गर्व गर्ने बाबु प्रमोदकुमारलाई ‘आफ्नी छोरीको पढाइ राम्रो भनेको के हो र परीक्षामा उनले कुन विषयमा कति नम्बर ल्याएकी छिन् भन्ने चाहिं थाहा छैन ।
सोही गाउँकी श्रीकुमारी महतोकी छोरी आरती पनि यही विद्यालयमा पढ्छिन् । कक्षा ३ मा पढ्ने आरतीको पढाइबारे आमा श्रीकुमारी पनि अनभिज्ञ छिन् । उनले भनिन् “आफूले त विद्यालय पठाउने हो, सरहरूले राम्रै छ भनिरहनुभएको छ ।”
शिक्षाका मुद्दामा चासो राख्ने सिरहाका राजनीतिकर्मी रामकिशोर यादव सामुदायिक स्कूलहरूले लब्धांकपत्र दिए विद्यार्थी र अभिभावकले आफ्नो बलियो र कमजोर पक्ष थोरै भए पनि थाहा पाउन सक्ने ठान्छन् । उनले भने, “निजी विद्यालयले सबै विद्यार्थीको ‘प्रोग्रेस रिपोर्ट’ दिएझै सामुदायिक स्कूलले पनि अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । यसले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि छर्लङ्ग बनाउन मद्दत गर्छ ।”
परीक्षामा सोधिएका प्रत्येक प्रश्नको अंकभार तोकिएको हुन्छ । जस्तो, अमूक प्रश्नको उत्तर सही लेखेमा यति अंक दिइने भनेर प्रश्नपत्रमै उल्लेख हुन्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नेले प्रश्नै पिच्छे अंक दिएर अन्तिममा ती अंकहरू जोडेर समग्र नतिजा निकाल्नुपर्ने हो । तर, हामीले अध्ययन गरेका सामुदायिक स्कूलका विद्यार्थीले परीक्षा दिएको कापीमा धेरैजसोमा उत्तरपुस्तिका हेरेजस्तो गरेर एकमुष्ट अंक दिइएको छ, प्रश्नगत रूपमा परीक्षण गरिएको पाइँदैन । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–२ बडहरामालस्थित नेपाल राष्ट्रिय फूलकुमारी महतो माविमा कक्षा ९ मा पढ्ने सचिनकुमार रायले लेखेको अनिवार्य अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकालाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनको उत्तरपुस्तिकामा सीधै ५१ अंक दिएर गोलो घेरा लगाइएको छ । तर उनले लेखेको उत्तर ठीक छरछैन भन्नेमा परीक्षकको ध्यान गएको देखिन्न ।
कर्जन्हा नगरपालिकाकै गौतारी आधारभूत विद्यालयमा पनि यस वर्ष लिइएको वार्षिक परीक्षाका कापी जाँच नगरेको भेटियोस किनभने यस विद्यालयका कक्षा ५ का सबै विद्यार्थीले यो वर्ष सामाजिक विषयमा समान २०–२० अंक पाएका छन् । विद्यार्थीको सिकाइस्तर मापन गर्ने परीक्षा प्रणालीमाथि विद्यालयले हदैसम्म लापरबाही गरेको एउटा उदाहरण थियो यो ।
राजादेवी ठाकोदेवी माविको कक्षा ७ को गणित विषयमा सबै विद्यार्थीलाई २र२ अंक दिइएको छ, तर किन र कसरी भन्ने खुल्दैन किन भने कापी जाँचिएकै छैन ।
सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–३ स्थित जनता आधारभूत विद्यालयमा हालै लिइएको वार्षिक परीक्षाको कापीमा जथाभावी अंक दिइएको पाइन्छ । यो स्कूलले केही कापीमा परीक्षण नै नगरी अंक दिएको छ भने कतिपयमा विभिन्न उत्तरमा दिइएको अंक र त्यसको एकमुष्ट अंक फरक रहेको पाइएको छ । कक्षा २ को नेपाली विषयको परीक्षा दिएकी गरिमाकुमारी चौधरी, खुश्बूकुमारी महतो, सुस्मिता विक सहितका विद्यार्थीको कापी हेर्दै नहेरी सबैलाई १४÷१४ अंक दिइएको देखिन्छ । ईश्वरपुरकै चन्द्र आधारभूत विद्यालयमा कक्षा २ मा पढ्ने विष्णुकुमार यादवले गणित विषयको उत्तर लेखेको पुस्तिकाको परीक्षण गर्दा जम्मा ४ अंक मात्रै पाएको देखिन्छ । तर, कापीको माथि उनले पाएको कुल अंक २० उल्लेख छ ।
सप्तरी, राजविराज–१२स सिंग्यौनस्थित जनता प्राविले पनि नाम मात्रैको परीक्षा लिइएको भेटियो । यहाँ विद्यार्थीलाई सादा कागज दिएर आफ्नो नाम, विद्यालयको नाम, रोल नम्बर, कक्षा लेख्न लगाएर परीक्षा लिने औपचारिकता पूरा गरेको पाइन्छ ।
यस क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले तल्लो तहका मात्रै होइन, माथिल्ला तहका कक्षामा समेत परीक्षा लिन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न अल्छी गरेको भेटिन्छ । राजविराजस्थित राजोदेवी ठाकोदेवी माविको कक्षा ७ को गणित विषयमा सबै विद्यार्थीलाई २÷२ अंक दिइएको छ । विद्यालयका प्रअ दिलीप यादवलाई यो काम प्रति कुनै ग्लानि छैन । उनले भने, “राम्रो उत्तर लेखेनन्, अंक दिइएन ।” विद्यार्थीले राम्रो उत्तर नलेखेका भए पनि, सबैले २–२ का दरले समान अंक कसरी पाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न उनका निम्ति अर्थहीन लाग्छ ।
अधिकांश स्कूलले किन नाममात्रको परीक्षा लिन्छन् र उत्तरपुस्तिका जाँच्दैनन् त ? यस सम्बन्धमा हामीले प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूको धारणा जान्न चाह्यौं । सरकारको उदार कक्षोन्नतिको नीतिलाई यस भेगका विद्यालयहरूले ‘सबैलाई पास गर्नैपर्ने सरकारी आदेश’ का रूपमा अथ्र्याएर त्यसकै बहानामा जाँचै नलिने, लिए पनि उत्तरपुस्तिका राम्ररी परीक्षण नगर्ने र विद्यार्थी–अभिभावकलाई सिकाइ–उपलब्धिको रिपोर्ट या मार्कशीट आदि केही नदिने गरेको पाइयो । “जाँचेर नम्बर दिंदा अधिकांश विद्यार्थी फेल हुने भएकाले सबैलाई उत्तीर्ण नम्बर मात्रै दिने गरिएको हुन्छ” नाम नबताउने शर्तमा सिरहाका एक जना प्रधानाध्यापकले भने, “कक्षामा कुन विद्यार्थी कस्तो छ भन्ने हामीलाई थाहा भइहाल्छ, त्यो आधारमा पनि अंक दिने गरिन्छ ।” अर्थात् कापी जाँच नै नगरी विद्यार्थीको अनुहार सम्झ्ेर पनि अंक दिने गरिएको उनले लुकाएनन् ।
उत्तरपुस्तिकाको दुवै पाटो स् सर्लाहीको ईश्वरपुरस्थित चन्द्र आधारभूत विद्यालयको कक्षा २ का छात्र विष्णुकुमार राउतले गणितमा २० अंक पाएको देखिन्छ तर कसरी ?
सिरहाको लक्ष्मीनारायण आधारभूत विद्यालय (कक्षा १–५) मा अर्धवार्षिक परीक्षाको कापी अघिल्लो महीनासम्म जाँच गरिएको थिएन । त्यसैगरीस परीक्षा सकिएर विद्यार्थीहरू नयाँ कक्षामा भर्ना भएको झ्ण्डै महीना दिन बित्दासम्म राजविराज–१२ स्थित जनता प्रावि, सिंग्यौनको कुनै कापी जाँचिएको छैन । उत्तरपुस्तिका नजाँचिकन नै विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा पढाउन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा विद्यालयका प्रअ चन्द्रकान्त यादवले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे “जाँचेर के हुन्छ ?” उनले कसैलाई फेल गर्न नमिल्ने भएकाले कापी जाँच नगरिएको बताए ।
लब्धांकपत्र दिने चलनः निजीमा छ, सामुदायिकमा छैन
यस क्षेत्रका प्रायः सबै निजी स्कूलले बालबालिकाको सिकाइ स्तर र उपलब्धिबारे अभिभावकलाई नियमित जसो जानकारी गराउँछन् । विद्यार्थीले कुन विषयमा कति नम्बर ल्याए भनेर यस्ता स्कूलले जाँच लिएपिच्छेको लब्धांकपत्र (मार्कशीट) अभिभावकलाई पठाउँछन् । तरस यहाँका सामुदायिक स्कूलमा भने विद्यार्थीलाई मार्कशीट दिने गर्दैनन् । प्रधानाध्यापकहरू सोझै भन्छन्, “यस्तो चलनै छैन ।” धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–७ स्थित आधारभूत विद्यालय पोर्ताहाका प्रअ चन्देश्वर महतोले ‘मार्कशीट’ दिने चलन नभएको बताए । उनले भने, “मार्कशीट कहिल्यै दिने गरेकै छैन ।”
पर्साका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख बर्खु रजक विषयवस्तुले खोजेको ज्ञान विद्यार्थीमा पुगेरनपुगेको मूल्यांकन नै परीक्षा भएको बताउँछन् । उनले भने “त्यसैले परीक्षामा कापी जाँच गरेर कसले कति सिकाइ उपलब्धि गरे, त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।” उनले आफूले कापी जाँच नभइरहेको भन्ने कुरा पहिलो पटक सुनेको बताए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सप्तरीका प्रमुख डोलराज पाण्डे राम्ररी परीक्षा नलिनु र कापी नचाँच्नु विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई खेर फाल्नु हो भन्छन् । उनी भन्छन्, “मैले पहिलो पटक यस्तो कुरा सुनें, यसबारे म बुझछु ।
श्रवण कुमार देव/सुरेन्द्र कामतिः खोज पत्रकारीता केन्द्र
महानिर्देशक हटाउनुमा कुनै स्वार्थ छैन : मन्त्री महासेठ
सन्दीपलाई त्रिभूवन विमानस्थलमा भव्य स्वागत